Markii aan akhriyay qoraalka uu soo malmaluuqay ninka sheegtay Suxufiga ee Siciid Sheekeeye ayaan aad iyo aad uqoslay sababtoo ah Siciid Sheekeeye Lama Gudboonayn in isaga oo kale oo la ogaa musuqmaasuqii iyo gacan qabashadii uu kaga taajiray dawlada Axmed Siilanyo inuu cid kale oo Madaxweyne Muuse Biixi ugu horeeyo uu maanta dhaliilo.
Siciid Sheekeye waxa ku qoran qoraalkiisa uu kusoo gabagabeeyay isagoo leh”Ilaahayaw caadifaad qabiil naga ilaali, Ilaahayaw dawladnimo dhaba nasii.markuu sidaa leeyahay wuxuu ku dhaliilayaa oo eedo aanu shuqul kulahayn dusha usaarayaa Xukumada Maanta ee Madaxweyne Muuse Biixi isagoo ku eedeynaya in Muuse Biixi Degmada Gabiley uu kadhigay Darajada A halkana Degmada Caynabana uu C Ka Dhigay.
Taasi oo aanay waxba ka jirin ee Xukumadihii hore ee soo maray dalka ay hirgaliyeen,
Laakiin xeerkan ismaamulka Gobolada iyo Degmooyinka ee Ansixiyeen baarlamaanki axadii uu ka dhigayo mid Xukumadu leedahay.
Siciid Sheekeye maadigaa maanta cid dhaliil ujeedin kara iyadoo la ogyahay inuu muqaawil bilaa itaxaana seedigaa Xuseen Waji Xun iyo wiilkaad abtiga utahay ee Morgan ay kugu siiyeen mashaariic aad ka tanaaday intii ay jirtay Xukumadii Axmed Siilanyo. Waa Nasiib daro inaad banka isaa soo dhigtay halkaad ka dhuuman lahayd ee isqarin lahayd.
Cadaawe Cali Faarax